Manintona ireo tanàna manodidina ny renivohitr'i Korea Atsimo satria mifantoka ao aminy manokana ireo mpizahatany mpizaha tany. Amin'ny faran'ny herinandro sy amin'ny fialantsasatra dia afaka mitsidika ireo valan-javaboary maro , zaridaina sy toeram-pialam-boly . Ireo mpankafy fialam-boly faran'izay henjana sy fialantsasatra amin'ny ririnina amin'ny fanombohan'ny vanim-potoana amin'ny ski dia alefa any amin'ny iray amin'ireo toerana tsara indrindra eto amin'ny firenena - Hyundai Songu. Eto ny fepetra rehetra dia natsangan'ny mpizaha tany mba hiala sasatra amin'ireo metropole mafana sy saro-kenatra ao Korea Atsimo.
Toerana sy toetrandro Hyundai Songu
Ny iray amin'ireo toeram-ponenana malaza ao amin'ny firenena dia ao amin'ny faritra avaratra-atsinanana, ao amin'ny faritanin'i Canvando. Na dia eo aza izany fifanarahana izany, ho an'i Hyundai-Songu dia manavaka ny toetr'andro monyson. Mahafinaritra ny mijanona eto mandritra ny taona. Ny fotoam-pialan-tsambo dia maharitra telo volana ririnina. Amin'ny taona mangatsiaka sy lanezy, dia mitazona mandritra ny 4-5 volana izy, ny volana Novambra sy Martsa.
Amin'ny ririnina, ny haavon'ny rivotra any Hyundai-Songu dia miala hatramin'ny 5 ° C, ary amin'ny fahavaratra dia tsy mihoatra ny 25 ° C. Ny snow dia ampy ho an'ny skiing, ny snowboarding ary ny fanatanjahan-tena hafa.
Infrastruktur an'i Hyundai-Songu
Ho an'ny mpizaha-tany maro, i Korea atsimo dia firenena mahaleotena, teknolojia avo lenta ary karazam-basy, fa tsy ny ski an-tendrombohitra. Na dia eo aza ny fikambanana toy izany, ny fanjakana dia manolotra fahafahana maro ho an'ireo mpankafy ny fanatanjahantena. Miankina amin'ny fotodrafitrasa iray misokatra sy samihafa ny Hyundai-Songu. Manangana androany ao amin'ny faritaniny:
lalana ho an'ny ski freestyle;
lalan-dranom-pandihizana iray misy pipisy;
gondole iray ambany;
fito ny fiakarana.
Amin'ny ankapobeny, dia misy lalana 20 ahitana ny fahasamihafana isan-karazany ao amin'ny faritry ny toeram-pandeha. Tsy mahagaga raha tamin'ny 2009, tao Hyundai-Songu no nitazonana ny Championship World Snowboarding. Misy ihany koa ny sekoly ski izay ahafahan'ny mpitsidika rehetra mianatra ski na sambo. Ho an'ireo mpizaha tany tsy voaomana eny amin'ny faritry ny trano dia misy fivarotana sy fanofana fitaovana fanatanjahan-tena.
Fialam-boly ao Hyundai Songu
Fahadisoana ny mino fa ny toeram-pialan-tsambo dia noforonina ho an'ny mpankafy ny fanatanjahantena mavitrika. Ny fialan-tsasatra ao Hyundai-Songu dia azonao atao:
hitifitra ao amin'ny trano fitifirana;
milalao golf, billiards na bowling;
mividy fahatsiarovana amin'ny fivarotana fahatsiarovana;
mitsidiha ny gym, sauna na dobo filomanosana anaty trano.
Ny hariva, ireo vahiny avy any amin'ny resort dia mankany amin'ny clubclub, bar na karaoke. Ho an'ny ankizy dia misy kianja filalaovana.
Ao amin'ny faritanin'i Hyundai-Songu, iray ihany ny hotely - Hyundai Sungwoo Resort. Avy ao amin'ny efitrano mampiadana sy mampiadana azy, dia manana fomba fijery mahatalanjona momba ny pistes ary ny lohasaha. Ny hotely dia manome sakafo maraina maimaim-poana. Ho an'ny sakafo antoandro na ny sakafo hariva dia afaka mitsidika ny iray amin'ireo trano fisakafoanana elite izay manokana ny sakafo Koreana , Aziatika ary Eoropeana.
Ahoana no hahatongavana any Hyundai-Songu?
Ny toeram-pialan-tsambo dia any amin'ny faritra atsinanan'i Korea Atsimo, 100 km miala ao Seoul . Ny maha-renivohitra azy dia ilaina ny mahita ny terminal "Seoul-Express", avy any amin'ny bisy mankany amin'ny fiantsonana Wonju . Afaka miova ho an'ny famindrana maimaim-poana ianao, izay manolotra an'i Hyundai-Songu. Mivezivezy in-dimy isan-kerinandro ny bus, manomboka amin'ny 07:30 hatramin'ny 19:50.
Avy any Seoul ka hatrany Wonju dia mety hahatratra ny fiaran-dalamby, izay miforona ao amin'ny station Cheongrianni. Na ahoana na ahoana, alohan'ny hahatongavan'i Hyundai-Songu amin'ny alàlan'ny fiara fitaterana maimaim-poana.
Tondra-drano ny rano
Historical Museum of Jakarta
Museum of Illusions Optimal
Kitapo plastika ho an'ny legioma
Fanamboaran-trano anatiny ao amin'ny tranon'ny firenena iray - hevitra tsara indrindra ho an'ny trano maoderina
Rivanol ho an'ny fanesorana ny volo
Tora-bato miendrika vato
Manana aretim-pivalanana ilay zaza
Kiraro tsara indrindra amin'ny 2013
Kinkali ao anaty boaty roapolo
Miala sasatra eo ambanin'ny hazo
Aretina amin'ny rctum
Iron ho an'ny vehivavy bevohoka
Chrysanthemum Room - Torohevitra mahasoa ho an'ny fiahiana
Harefo amin'ny alika